Habka ugu wanaagsan ee dib loogu kasban karo macaamiishii hore | Camei Ele&warshadaha
Siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu kasban karo macaamiishii hore
Macaamiisha lumay waxay u taagan yihiin fursad wayn. Macaamiishii hore waxay fahmeen alaabtaada, iyo sida ay u shaqeyso. Intaa waxaa dheer, waxay inta badan ka tageen sababo si fudud loo saxo.
Maxay macaamiishu uga baxaan?
Haddii aad ogtahay sababta macaamiishu uga baxaan, aad bay u fududahay inaad dib ugu guulaysato. Waa kuwan sababaha ugu sarreeya ee ay macaamiishu u joojin karaan ganacsigaaga:
Waxaa ka xayuubiyay tartame ballan qaaday qiimo ka wanaagsan, adeeg wanaagsan ama faa'iido kale.
Ururkoodu wuu isbedelay, maamulka cusubina kama warqabaan meelaha ay ku wanaagsan yihiin adeegyadaada ama alaabtaada sababtoo ah xogtan looma gudbin kuwii iyaga ka horeeyay.
Adiga ama shirkaddaadu waxa aad ku guul daraysatay in aad wax u keento sidii ballanku ahaa.
Adiga ama shirkaddaada waxaad ogolataan kalsoonida ama ixtiraamka inay burburiyaan xiriirka.
Waxa kale oo laga yaabaa inay jirto sabab qarsoon, sida macmiilku inuu qaraabo ku leeyahay meheradda uu hadda la tacaalayo, uu waayey awoodda wax iibsiga, ama uu ururkooda uga tagayo jago kale.
Sahan ay dhawaan ku samaysay macaamiishii hore ee shirkadda Fortune 1000 ayaa muujisay in saddex meelood meel ay sheegeen in ay ku noqonayaan shirkaddii ay ka tageen haddii loo yimaado. Markaa sida cad, dadka wax iibinaya ee akoonnada waayay mar kale ma waydiisan ganacsigoodii.
Saddex tilaabo oo loo maro barnaamijka dib-u-guulaysiga
Barnaamijka guul-guulaysiga wanaagsan waxa uu ka kooban yahay saddex tallaabo:
Soo hel sababta macmiilku u joojiyay wax iibsiga. Ka raadi diiwaannada tilmaamo ka dibna wac macmiilka oo weydii waxa khaldamay. Isku day inaad isu keento soo jeedin gaar ah oo ka hadlaysa sababta aad akoontiga u lumisay markii hore.
Baar xaaladda macmiilka ee hadda. Waxaa laga yaabaa in meheradda macmiilku is beddeshay. Haddii aad fahamto waxa dhacay, waxaad abuuri kartaa dalab ka wanaagsan oo ka faa'iidaysan doona isbeddelladaas.
La xidhiidh Wac macaamiishii hore oo ogaysii isaga ama iyada inaad rabto inaad dib u hesho ganacsigoodii.
Waxaa suurtogal ah inaadan heli doonin ballan degdeg ah. Laakiin waad beeran doontaa abuur; Taasina waxay siinaysaa macmiilkii hore beddelka haddii isaga ama iyada ay la kulmaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka alaab-qeybiyaha ama alaab-qeybiyaha hadda.
Qaar ka mid ah dadka wax iibinaya ee lumisa macmiilku waxay la kulmaan dareen-celin shucuureed oo kala duwan: eedaynta qof kale, xanaaqa ama orda oo dhuumanaya. Iibiyeyaasha guuleysta waxay fahmeen qulqulka iyo qulqulka ganacsiga iyo cilaaqaadka.
Waa kuwan dhowr talooyin oo aad isticmaasho marka aad lumiso macmiil:
Soo ogow waxa uu tartame kaa qabtay si aad ganacsiga u hesho.
Ha u qaadan inay qiimo ahayd, xataa haddii taasi tahay waxa laguu sheegay.
Ha u ogolaan inay si xun u saamayso dabeecadaada. Ku sii wad.
Ha ka tirtirin macaamiishii hore xogtaada. Ku shaqee qaar ka mid ah jadwalkaaga toddobaadlaha ah.
Sii wad inaad u dirto markhaatifurka iyo maqaallada waxtarka leh macaamiishaadii hore.
Hayso xeelad gaar ah oo lagula tacaalayo ganacsiga lumay.
Xasuusnoow in awoodda joogitaanka muddada dheer ay aad uga faa'iido badan tahay guusha degdegga ah ee muddada gaaban.
Dhisida daacadnimada macmiilka
Dhisida daacadnimada macneheedu waa in diirada la saaro baahiyaha macaamiisha halkii laga iibin lahaa kaliya si ay uga caawiyaan xalinta dhibaatooyinkooda. Waxay la macno tahay ka wareejinta diiradda iibiyuhu alaabta ama adeegga la siinayo baahida macaamiisha.
Isku day inaad fuliso tillaabooyinkan isla marka aad xidhid heshiiska:
Si joogto ah ula xiriir. La xiriirida macaamiisha waxay ku ogaysiinaysaa inaad ka fikirayso iyaga oo aanad u qaadanayn wax run ah. U dir macluumaadka waxtarka leh si joogto ah, ma aha oo kaliya agab xayaysiis. Macaamiishu waxay jecel yihiin inay ogaadaan waxaad ku fikirayso, ma aha oo kaliya waxaad iibinayso. Isku day inaad tustid inaad danaynayso, oo tus inaad ku faraxsan tahay in macaamilku kula ganacsanayo.
Ballanqaadyo macquul ah samee. Waa wax soo jiidasho leh in la dhaafo, gaar ahaan marka uu jiro tartan adag oo ku lug leh. Ballan-qaadka oo aan la fulin ayaa ka mid ah sababaha ugu horreeya ee xisaabaadka lumaya. Way ka fiican tahay inaad run noqoto intii aad samayn lahayd ballanqaadyo laga yaabo inaadan awoodin inaad ilaaliso.
Si degdeg ah uga jawaab su'aalaha ama cabashooyinka macmiilka. Jawaab degdeg ah waxay u sheegaysaa macmiilka inaad danayso; mid daahsoon wuxuu keenaa fariin khaldan.
Noqo khadka toogashada oo u diyaargarow inaad la macaamilto macaamiisha xanaaqsan marka arrimuhu khaldamaan. Iibiyeyaasha ayaa inta badan ah kuwa ugu horreeya ee la xiriira macaamilka aan ku qanacsanayn ama ay ogaadaan xaalad keeni karta qancin. Cabashooyinka u arag fursado, maadaama lagu xallinayo qanacsanaanta macaamiisha waxaa la og yahay inay dhisto daacadnimada macaamiisha.
Hubi tayada. Helitaanka jawaab celin iyo dabagal si loo hubiyo in badeecad ama adeeg la gaarsiiyay si uu ugu qanco macmiilku waxay yeelan kartaa faa'iidooyin waaweyn xagga kobcinta daacadnimada macaamiisha.
Isku xidhka shaqada dadka kale ee shirkadda si loo daboolo baahiyaha macmiilka. Ilaali jawi wanaagsan, wax soo saar leh, macaamiisha diirada saaraya taas oo baahiyaha macaamiisha la siinayo mudnaanta koowaad.
Bixi dabagal istiraatiiji ah si aad u hubiso in akoonku uu ahaado mid wanaagsan. Ganacsiga joogtada ah, ku celcelinta iyo gudbintu waxay ka yimaadaan macaamiil qanacsan. La xidhiidh macmiilka ka dib marka la iibiyo oo aad hubiso in wixii lagu heshiiyey la sameeyo. Tus inaad si dhab ah uga walaacsan tahay daryeelka macmiilka. Horey u sii qorshee si aad u xalliso mashaakilkooda gaarka ah qaab iyaga qiimo u leh.
Aaladahan lagu kordhinayo daacadnimada macmiilka ayaa si gaar ah waxtar u leh, laakiin waxay qaadan kartaa tiro iyaga ka mid ah isku mar si ay saameyn weyn u yeeshaan. Qodobka muhiimka ah ee la xasuusan yahay waa haddii aanad qaadin tillaabooyin aad ku qabsanayso daacadnimada macmiilka, tartame waxay u badan tahay inuu sameeyo.
Wareysi macaamiisha daacad ah
Wareysiga macaamiisha daacadda ah waa mid aad u qiimo badan, sababtoo ah inta badan waxay si daacad ah u sheegi doonaan sababta aad u ilaaliso ganacsigooda. Caadi ahaan waxay diyaar u yihiin inay kuu sheegaan waxa ay kugu saabsan yihiin xirfadle iibiye ahaan, badeecadaha iyo adeegyada shirkaddaada, iyo tartankaaga. Waxa kale oo laga yaabaa inay ku siiyaan jawaab celin meel kasta oo aad ku horumarin karto iibkaada.